Uyicwangcisa njani ikhompyuter yakho kwiLogic Pro X
Ukuba awukayifaki i-Logic Pro X kwikhompyuter yakho, yifumane kwiVenkile yeApple yeApple. Vula iVenkile yoSetyenziso kwifolda yakho yeZicelo kwaye ukhangele iLogic Pro X. Thenga kwaye uyifakele (iwizard yofakelo iya kukukhokela) - kodwa yiba nomonde ngelixa ukhuphela kuba le nkqubo imalunga ne-800MB.
Udinga ubuncinci be-5GB yendawo yediski kunye ne-35GB ukuba ufuna ukongeza umxholo ongakhethwayo okhoyo ngokukhutshelwa simahla kwi-app. Ufuna ubuncinci be-4GB ye-RAM, umboniso onesisombululo se-1280-by-768 okanye ngaphezulu, kunye ne-OS X v10.8.4 okanye kamva.
Ukukhuphela umxholo weLogic Pro X, yazisa ngeLogic Pro X. Khetha iLogic Pro X → Khuphela uMxholo owongezelelweyo. Khetha zonke iiphakheji zomxholo owongezelelweyo ofuna ukuzifaka, emva koko ucofe iqhosha lokufaka.
Nazi ezinye iingcebiso zokwenza amava akho ngeLogic Pro X ibe mpuluswa kangangoko:
Nika ingqalelo kwii-backups zoMatshini weXesha. Ukuba usebenzisa iTime Machine ukugcina ikhompyuter yakho, iTime Machine inokufikelela kwi-hard drive ngelixa ungena kwi-hard drive kunye neLogic Pro. Ngenxa yoko, unokufumana impazamo ukuba usebenza kwiprojekthi enokubala okuphezulu okanye iisampulu ezininzi ezisasazwa kwidiski. Cima umatshini wexesha okwethutyana ukuba uhlangabezana nayo nayiphi na imiba.
Cima ezinye ii -apps ukuba uphelelwe ngamandla okanye ukuba iLogic Pro iba nobukhazikhazi.
Khusela i-nap kwi-OS X Mavericks. Xa ii -apps zifihliwe kwaye zingasebenzi, ziyangena insiza ukugcina amandla kunye nobomi bebhetri. Eli nqaku linokungena endleleni ukuba ubeka i-Logic Pro ngasemva ngelixa usithi, jonga amazwi kuxwebhu lokubhaliweyo ngelixa urekhoda ilizwi lakho.
Ukuthintela ukuloba kweLogic Pro, yiya kwifolda yezicelo, cofa ekunene okanye Ctrl ucofe usetyenziso lweLogic Pro X, kwaye ukhethe Fumana ulwazi. Emva koko khetha i-Prevent App Nap ibhokisi yokujonga.
Bonisa izixhobo eziPhambili. I-Logic Pro X ineempawu ezininzi eziphambili ezingafumanekiyo ngokungagqibekanga. Kwimenyu ephambili, khetha i-Logic Pro X → Ukukhetha → Izixhobo eziPhambili kwaye ukhethe ibhokisi yokujonga izixhobo eziPhucukileyo.
d2 ivithamini 50000 iu
ibuprofen qho kwiiyure ezi-4
ketoconazole 2% ishampu
fluoxetine hcl 10mg philisi
iziyobisi zokugcina umchamo
Ukukhangela iziyobisi ngegama